ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလွန်အကျွံသည်းခံနေကြောင်း ဦးဝင်းတင် ဝေဖန် – Veteran Burmese activist Win Tin says democracy icon is too conciliatory – MoeMaKa Burmese News & Media
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလွန်အကျွံသည်းခံနေကြောင်း ဦးဝင်းတင် ဝေဖန် – Veteran Burmese activist Win Tin says democracy icon is too conciliatory
March 13, 2013 March 13, 2013 Yan Lo Kywe
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၂
မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၃
ဓာတ်ပုံ – James Mackay
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အလွန်အကျွံသည်းခံသူဖြစ်ကြောင်း NLD ၀ါရင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးဝင်းတင်က ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်သည်။၀ါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ Veteran Burmese activist Win Tin says democracy icon Suu Kyi is too conciliatory ခေါင်းစဉ်တပ် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တွင် ယမန်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ယင်းသို့ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။”ကျွန်တော်တို့ထဲကတချို့ကတော့ ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲ ပို့လိုက်ချင်တာ။ သူကတော့ (ရန်ကုန်မြို့)ကန်တော်ကြီးထဲ တွန်းချလိုက်တာမျိုးလောက်ပဲ လုပ်ချင်တာ” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြုံးပြီး ပြောသည်ဟု ရေးထားသည်။
ဆောင်းပါးတွင် ဦးဝင်းတင် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အကြောင်းကို အသားပေး ရေးထားသည်ကို ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်စုက တချိန်ချိန်တွင် သမ္မတဖြစ်လာရေးအတွက် စစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ညှိနှိုင်းစေ့စပ်ပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လိုဟန်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်း၊
ဦးဝင်းတင်က အခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းလိုသူဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ရေးထားသည်။
စစ်အုပ်စုက အပြောင်းအလဲ အနည်းငယ် လုပ်ပြရုံဖြင့် သွေးအေးမသွားကြရန် သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကို သတိပေးနေရသည်ဟု ဆိုသည်။
“စာနယ်ဇင်းသမား တော်တော်များများ၊ နိုင်ငံရေးသမား တော်တော်များများက အခြေအနေ ကောင်းနေပြီလို့ ထင်ကောင်း ထင်ကြလိမ့်မယ်။ သိပ် ကျေနပ်နေကြတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောချင်ကြဘူး။ သူတို့က အစိုးရကို မဝေဖန် မတိုက်ခိုက်ချင်ကြဘူး။ အဲဒါ ပြဿနာပဲ” ဟု ဦးဝင်းတင်က ၀ါရှင်တန်ပို့စ်ကို ပြောလိုက်သည်။
သံတမန်တချို့ကမူ အသက် ၈၃ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်သော ဦးဝင်းတင်သည် သဘောထားတင်းမာသူ၊ လက်ရှိ အပြောင်းအလဲနှင့် အံဝင်ခွင်ကျခြင်းမရှိသောသူတစ်ဦးဟု မြင်ကြသည်ဟု ယင်းဆောင်းပါးက ဆိုသည်။
NLD မှ ခွဲထွက်သွားသူများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် NDF ပါတီ ဌာနချုပ်တွင်လည်း ဦးဝင်းတင်က နာမည်ကောင်းမရကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ဆက်လက် ဖော်ပြထားသည်။
ထောင်သက်ရှည်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့သူ NDF ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ဦးဝင်းတင်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ထားပုံကိုလည်း ၀ါရှင်တန်ပို့စ် ဆောင်းပါးတွင် ရေးထားသည်။
“သူက ရူးနေတဲ့လူပဲ။ ထောင်ထဲမှာပဲ အာဇာနည်အဖြစ် သေသွားချင်တဲ့သူပဲ” ဟူသော အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ် ဦးခင်မောင်ဆွေ၏ စကားကို ကိုးကား ဖော်ပြထားသည်။
ဦးဝင်းတင်သည် အကျဉ်းသားယူနီဖောင်းဖြစ်သည့် အပြာရောင်ကို အမြဲ ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွတ်မြောက်လာသည်အထိ ထိုကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါးတွင် ရေးထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလွန်အကျွံသည်းခံနေကြောင်း ဦးဝင်းတင် ဝေဖန်ချက်ကို ဖော်ပြထားသည့် ဤဆောင်းပါး ထွက်ပေါ်လာချိန်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် ပြုစုသည့် လက်ပံတောင်းဒေသအစီရင်ခံစာအပေါ် အများအပြားက မကျေမနပ် ဖြစ်နေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ကမ္ဘာရေနေ့၊ ရေအရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှစ် – ၂၀၁၃ ခုနှစ် နှင့် မြန်မာနှိင်ငံ (Maung Kyay Yay) →
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်/Aung San Suu Kyi-san in Japan
April 10, 2012 April 10, 2012 Yan Lo Kywe
ဦးကြည်မောင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၈ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အစီအစဉ် – remembrance of U Kyi Maung
August 18, 2012 August 19, 2012 Yan Lo Kywe
မိုးမခမီဒီယာအမည်ဖြင့် သတင်းထောက်များ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ စေလွှတ်ထားခြင်းမရှိ
4 thoughts on “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလွန်အကျွံသည်းခံနေကြောင်း ဦးဝင်းတင် ဝေဖန် – Veteran Burmese activist Win Tin says democracy icon is too conciliatory”
GSC.Ko Thi Ha says:
“The struggle between Revolutionists & Reformists”
In 1965/66,China’s Revolutionist leader-Mao removed & sentenced China’s Reformists-Lu Shio Chi & Tang Shio Peng on Hunan’s peasant-report but in 1976,Mao on Cho Inlai’s consults called back Tang Shio Peng from force labour camp and Mao said that “you areagood fighter” and then,transfered Tang Shio Peng the state power to do the modern developmental China with four modernizations on Special Economic zones and so,Today-China became the greatest modern developmental China.
Now,the struggles between Burma’s Revolutionists & Reformists have started on Lapadaungtong’s red copper project and so,surely! All Burma’s National peoples will sympathy only the able served leaders on Country & their profits and so,we shall have to wait & see their competition on the profits of Country & All Burma’s National Peoples.
ကျွန်တော်က ရန်ကုန်ကပြည်သူတစ်ဦးပါ၊ လက်ပံတောင်းဒေသအစီရင်ခံစာအပေါ် တွေ.တဲ.လူတွေကိုသဘောထား
မေးကြည်.တာ ၃၀ လောက် မှာ ၁ ယောက် ဘဲ ထောက်ခံတာ တွေ.ပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင်လဲ သဘောမကျပါ ။
ဦးပိုင် မှာပါဝင်နေတဲ.ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလဲ ၊ သာမန် ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ဆင်းရဲနေလဲ
နှိုင်းယှဉ်ကြည်.ရင် လက်ပံတောင်းဒေသအစီရင်ခံစာအပေါ် ပြည်သူတွေ ကန်.ကွက်တာ ၊ သဘောမတူတာ မလွန်ပါဘူး ။
မှားတာရှိရင် ဝေဖန်ပေးပါဗျာ ။။ ။။ ။။
ဦးဝင်တင်ပြောတာ မှန်တယ်။စစ်အစိုးရက နားလည့် ပါးလည့်လုပ်နေတာပါ။တကယ်မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။